Teaching — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ichi Trip yaiti kubva ERLC Summit pamusoro Gospel uye marudzi Reconciliation. Below ndiro chinyorwa kubva mashoko kuti.
Manheru ano, Ndanga akakumbira kutaura millennials uye kwemarudzi kuyananiswa. Uye ndinonzwa neropafadzo kumira pano uye kushanda sechikamu ichi chinoshamisa nesimba kune kubatana mukereke yaMwari.
Somunhu rapper, Ndagara chikamu yakawanda Concerts mumakore pamwe yakawanda millennials uye vanhu vose zera neeSultan. Uye ndaona kuti mumhanzi zvechokwadi ane nzira rokubatanidza vanhu. Pane dzimwe Concerts apo kunongova wevanotungamirira mumwe wevanhu: pamwe zvose nhabvu moms uye chena Suburban kuyaruka, kana zvose Urban pakoreji vadzidzi, kana zvose vafundisi wokumaodzanyemba Baptist akapfeka khakis (Horaiti, pamwe kwete kuti wokupedzisira). Asi panewo zvakawanda umo marudzi ose vanhu vakuru nevaduku, dema nechena, uye mamwe mapoka akawanda. Uye vanhu vanochengeta kakawanda nokuwirirana kusiyana, uye ndinofunga kuti chinhu here chakanaka uyewo.
Ndichiri kuita izvozvo inotonhora uye anoshamisa, Handifungi kuti sezvo chaizvo sezvo vamwe kuti ani. Zuva nezuva varipo…
Zvakanaka tiri kunhivi iyoyo gore. Mumwe mbiri kakawanda vedu kuchechi naamai vedu, kana kupfeka zvakanaka Easter sutu uye musoro kuti chivakwa chechi iri pedyo. Ndinoziva vamwe y'all watova yenyu Isita sutu nemapfekero ichisarudzwa.
Zvinoita sokuti munhu wose anowana anotora chikamu mitambo. NeIsita vaya dzinonakidza nguva gore apo kunyange vanhu vanowanzogara regai hanya Jesu aite zvematongerwo dzimwe nzira. Kune Isita mazai uye Isita zvihwitsi Sale kwose kwose. Kune mapurogiramu Isita, uye vaipemberera. Easter anotora pamusoro zvishoma, kunyange vakawanda havatendi muna Isita nyaya.
Ndicho hazvishamisi Zvisinei nokuti Easter uye Christmas vakava nemagariro zviitiko. Vangobvumira dzikava shoma kupfuura mazororo enyika, kusanganazve mhuri, uye mikana retailers kumboitawo mari yakawanda. Ehe saizvozvo, avo vanotenda kuberekwa uye rufu rwaKristu vanopemberera kuti, asi zviri zvisingamanikidzirwi.
Ndinoyeuka kukura mhuri yangu vaienda zvose panze kuti Isita. Taizorega kuenda kumashopu vhiki asati uye tora mufananidzo pamwe Easter Bunny. Ini pachangu funga kuti ndiye creepiest pazororo mascots vose. A yakakura…
Vhidhiyo iyi inobva Mudzidzi Zvino musangano Batesville, MS. Kangamwirai henyu vhidhiyo uye zvakarekodhwa unhu
Last nguva isu akateya vamwe nheyo zvatakurukura pamusoro kuzivikanwa. Takataura pamusoro chii chinoita kuzivikanwa chinokosha; ainyanya kuti kana tisingazivi ani tiri, uye isu hatizivi kuti isu vanotofanira kurarama. Zvino isu taitaura sei tiri akaisvonaka akaita, asi kuputswa. Uye nokuda mukuputsika kwedu tiri vakaparadzaniswa naMwari uye vachida Muponesi.
Izvi mangwanani tava kukurukura imwe chokwadi akanaka pamusoro mukuponeswa naMwari, inova kuitwa. Panguva iyi kunyange, kukurukurwa chokuzivikanwa vachambokanganwa zvishoma. Zvose zvinhu takataura pamusoro okupedzisira night- yatiri chakaitwa naMwari, anozivikanwa naMwari, akaputsika, nomushaiwi-tiri vechokwadi vose Panyika. Zvinhu tava kutaura zvino zvinhu zvechokwadi nevaya vari Kristu. uri isu zvino kutaura sei kuzivikanwa kwedu Kuchinja apo tinova vaKristu
Nguva pfupi yapfuura Ndakaverenga Biography pakati Steve Jobs, muvambi uye newomuprofita shure Apple, guru boka munyika. Zvakanga dzinonakidza chaizvo kuverenga nokuti aiva shasha…
Pakupera kwevhiki rino tiri kuzotaura pamusoro nokuzivikanwa. Ndizvo zvakaitwa vatungamiri venyu akandikumbira kutaura, asi chii havana kuziva ndechokuti ichi chaiva atova chinhu vakambova pamwoyo wangu uye kuti ndanga ndichifunga pamusoro. Ndataura nezvazvo neboka youth kuchechi yangu D.C. vakasvimha.
Saka nei chitupa uri mumwoyo mangu? Nei Ndinofunga kuti zvinokosha chaizvo kuziva ani imi muri? Nokuti kana iwe usingazivi kuti ndiwe ani, hauzivi sei imi vanotofanira kurarama.
Funga The Bourne Identity. Uyu murume anomuka ari chikepe uye haazivi kuti ndiani. Anowana chinotiudza uye anoenda kuna Switzerland. Anoomesa mukurwisana uye anoziva iye yakadzidziswa muhondo. Ko kuva achipenga kana iwe randomly vakawana iwe waiva pachivande Ninja unyanzvi? Nokuti vamwe firimu iye rwendo kuziva kuti ndiani. Iye anogona zvinhu haana kutombozviziva. Asi kana iye asingazvizivi, haangagoni kurarama sezvo…
Vanogona Xians Iva Fun?
Ko ava muKristu kureva mugumo mafaro wangu? Ndizvo inonakidza mubvunzo uye ndinofunga ane munhu kubvunza. Pane imwe mufananidzo chiKristu chiri kazhinji kupendwa. Vanhu pavanofunga chiKristu vanofunga zvinhu zvakasiyana. Vamwe vanofunga kupopota TV muparidzi, vamwe vanofunga chena Guy ari suit kana mbuya dema mutana nechechi hombe ngowani. Vamwe vanofunga enyika kuzvikudza kana avo vasingashumiri kufanana sayenzi. Asi vanhu vashoma chaizvo kufunga chiKristu uye funga: Hey, kuti aizova kunonakidza chinhu kuita! Kuva muKristu zvinoita sezvisina Zvinonakidza vanhu.
ChiKristu yaakawana mukurumbira sezvo killjoy. Ndechimwe chinhu nokuda anofinha vanhu uye vanhu vekare. Mumwe rapper rwiyo inoti, "Kana imi kutya, ipapo kuchechi. "machechi Zviripachena dzechiKristu kuti inotya, anotyiswa punks. Vanhu vanofunga kuva muKristu kunoreva unofanira vanopfeka masutu uye refu madhirezi, uye mimhanzi yechiKristu zvakaipa, uye kumisa kuva muchitonhorera. Kutanga kwazvose, vamwe y'all hadzina atonhodze pakutanga, asi kuti chimwe nyaya.
Ini chete vakatarisa ichi Ja Rule Bvunzurudzo zuro. Akanga achitaura pamusoro ake nazvo machechi. In ruzivo ake machechi nguva dzose akati asvika sewe…
Vakura Saizvozvowo. Kazhinji tiri OK nekuita zvinhu hatisi kuita, sokuvapo munhu tinofanira kupindura kuti haasi kuwana. Uri kufara makarindira kusvikira ukaona cops mberi. Pamwe tiri vakafara kusiya basa mangwanani chero Bhasi wedu haasi kuwana. Pamwe vamwe vedu vanobiridzira pabvunzo sokuvapo muzvinafundo kusingasviki…
Paridza Kristu, Varatidze Mbiri
Vhidhiyo iyi uye mipumburu chinobva Trip kuti General Session panguva Legacy Conference 2013.
The dingindira iri musangano iri Soli Deo Gloria, kana Mwari rukudzo oga. Ndizvo dingindira guru. Uye tinoda kuti maonero - kuti vose kubwinya Yose Mwari oga, kuti vazivise ose chete chinhu zvatinoita. Munguva yangu manheru ano, Ndinoda kufunga kuti anoudza wokuparidza yedu.
Kutaurira vanhu nezvaJesu sokuti chimwe chezvinhu izvo tose tinoziva kuti tinofanira kuita, asi tose tinzwe mhosva pamusoro kuita zvakakwana. Ndizvo here? Ndiri ndoga kuti? Kunyange chete vhiki rino zvekare, Ndakanga kuora nemhosva nokuti ukama ndakatanga kuvaka nomumwe vavakidzani vangu vorudzii vakatanga idonhe. Handina kumbovapo sezvo kwakaunzwa sezvandinofanira nezvokuvaka pamusoro ukama, uye kuramba kuedza kumuudza nezvaJesu. Uye zvinoita sokuti Ndinonzwa iyi nzira kazhinji. Mubvunzo ndinoda kubvunza Ndokusaka? Chii mwoyo maonero anofanira wakaiswa? Ndinoda pfungwa dzangu kuti kuvandudzwa. Ndine kuyeuka nei ndiri…
All Tinoda zviri Mwari
Sevamwe munoziva, Ndiri baba vatsva. Mwanakomana wangu, Q, ndiwo mwedzi mishanu okuberekwa. Uye kufara akapotsa nguva dzose, kunze kana tikaisa naye ake wokuzvarwa kuti hope. Iye pakarepo anorasikirwa pfungwa dzake. Akanyatsofunga anofunga ratiri amuisa kuzvitarisira pachake kuzorwa zvose nezvinetso vakamupoteredza, akadai kuneta uye vaida mutambo wake achinja.
Asi rimwe zuva akaona mufaro yakayamwa paruoko rwake. Ndicho chinhu unozvipa rakanyorovera iye afunga. Zvino anoisa ruoko rwake mumuromo make - iye chaizvoizvo shoves naro imomo - akanganwa zvose pamatambudziko ake. It yorega kuchinja chokwadi chokuti isu akamusiya oga muimba yake, asi ruoko anomuita kanganwa nezvazvo.
tsime, Ndinoziva kuti munhu wose pano nhasi ane matambudziko akakura kupfuura akarara oga muimba. Tine nyaya mari, muchato nyaya, utano nyaya, zvichingoenda zvakadaro. Uye zvakafanana mwanakomana wangu, dzimwe nguva tinotsvaka nzira kutsungirira matambudziko edu. Hatidi kunzwa marwadzo uye nhamo. Saka tava kutendeukira kune zvinhu tive kanganwa nezvazvo. Asi kuti nzira yakanakisisa yokubata nayo? kukanganisika?
Uye chinhu kuti pane yakawanda anotanga kuti undervalued. Kukosha chinhu kuchinja kwakavakirwa sei zvakawanda nezvazvo pane. Kana paine 100 Cookies patafura pashure basa unogona kuramba kutaura kwechinguvana. Asi kana paine Cookies mashoma, vanoita anokosha. Uchawana tichimhanya uko kana wasvikako mumwe nguva, kuti…
Ndinoita mumhanzi mupenyu. Uye sezvo vazhinji nemiwo munoziva, ari mimhanzi ndinoita mhando ndiyo zvishoma yakasiyana pane nziyo iwe vanzwe paImba CHBC basa. Pane zvakawanda hip kuti zvinoita yakasiyana Genres mimhanzi. Chimwe chinhu chiri handivo hip, asi zvikuru zvinozivikanwa ndiyo Remix.
Chii zvinowanzoitika ane Remix ndiko tora rwiyo waita ndatoitwa uye iwe Remix naro. Unoramba dzimwe okunze kubva yepakutanga, asi imi Dzinochinjawo zvimwe zvinhu kuisa kuruka itsva pamusoro payo. Saka mungawedzera mashoko matsva, kana idzva urove rose, kana akarurama ZVAKASIYANA kuti zvimwechete. Asi mumwe zvinangwa kupa muteereri chinhu chitsva uye kunyange kuvandudza pamusoro rwiyo.
Zvakanaka Nesungano Itsva, iyo yedu rwezuva hurukuro pamusoro manheru, ndizvo anenge akafanana Remix. Ndinoti kuti nokuti Mwari anovimbisa kuti sungano itsva nevanhu vake, asi zvose nezvazvo hakusi chitsva. hunhu hwake haana kushanduka, Zvipikirwa zvake haana kuchinja, Chinangwa chake chikuru haina kuchinja. Asi pane zvimwe zvinhu pamusoro esungano ino…
Ndinoda kutanga nokufunga nyaya. Kubvira pakutanga nguva mave vamwe misoro anowanzosangana vanomhanya kuburikidza nyaya dzedu. Tine rudo nyaya, comedies, uye njodzi - kana musanganiswa vose vari aizivikanwa sezvo kudanana Comedy. Asi mhiri siyana vose mafirimu, pane misoro miviri kuti inenge nguva inoratidza: zvakanaka nezvakaipa.
Funga chaunofarira mafirimu. In Braveheart, Scotland uye William Wallace zvakanaka, apo England naMambo Edward akaipa. In renhoroondo Narnia vana uye Aslan zvakanaka, uye muroyi kwakaipa. Kunyange Disney mumafirimu, ichi ichokwadi. In Aladdin, Aladdin uye genie zvakanaka, asi Jafar akaipa. Rega kuita hauzivi pamusoro Aladdin.
Munogara Unoda zvakanaka divi kukunda uye vakawanda nguva vada.
Saka kana isu titange kutaura nezvaJesu uye kana isu kutaura nezvaMwari vanhu dzimwe nguva vanofunga zvakafanana Categories. Vanofunga zvakasikwa sezvo hondo yepasi pose pakati paMwari uye Dhiyabhorosi. Uye sezvinoita zvose kwedu kufarira nyaya, tiri vaitarisira mugumo kuona uyo anokunda. Ko Jesu sechaiva…
Kune zvinhu zvishoma kuti kumutsa rudo mukati memoyo wangu Jesu akaita kunzwa vaKristu vatsva - kana vaKristu - kuita paruzhinji ounyanzvi hwokugadzira kutenda kwavo kuburikidza nokubhabhatidzwa. Ndinofunga dzimwe shamwari dzangu, Zvisinei, vaiva muchiso vaKristu vatsva uye vaiva zvishoma vakavhiringidzika pamusoro pezvinoreva kuti zvaireva. Vanonzwa Mashoko Akanaka kuti they've zvakagadziridzwa zvisikwa zvitsva, kuti vane mwoyo mutsva, kuti vave akageza uye wakarurama. Uye vanofunga kuti izvi zvinorevei havazorambizve vanotamburira kana chiso muedzo. Asi munhu who's anga muKristu kwevhiki zvinogona kukuudza that's asina chokwadi. Mubvunzo hausi kana ticharamba nemiedzo. The mubvunzo, ko isu sei muedzo?
Ndakaverenga mazwi vhiki rino kuti akati, "Varume vose vanoedzwa. Hakuna munhu anorarama kuti harungaputswi pasi, chero bedzi ndizvo muedzo zvakarurama, akaisa zvakarurama dzashanduka. "Ko uyu mutsara yechokwadi? Hakuna ambova munhu akunde kunyange zvakanaka akaisa miedzo? tsime, let's kutendeukira kuna Luke 4:1-2:
Jesu, azere noMweya Mutsvene, akadzoka kubva paJorodhani akatungamirirwa noMweya iri…
Kune vamwe vanhu vane zvakanaka pane zvimwe zvinhu. Kune Basketball vatambi vanoridza mumitambo kwemakore nemakore uye vapedza mabasa avo akapfuma uye vafare. Vaida kutamba game vaida uye vaida kuita basa kuzviita. Vakaita izvozvo uye wava zvakanaka. Panewo vamwe, kufanana Michael Jordan.
Michael Jordan aiva zvinopfuura zvakanaka. Akanga kukuru - zhinji nharo, mukuru. Michael Jordan akanga asingagutsikani nokungova kuridza mutambo uye kuita basa. Mike aida kuva nani pane munhu wose. Akanga asina kugutsikana zvichiita, aida kuva chakanakisisa. Saka akagara ari yokurovedza muviri gare gare pane vose uye aishanda kupfuura vose. Uye zvose izvi nokuti akanga zvikuru rinosundwa kuti chido kurova iwe. Makaona ichi muimba yake mukurumbira pakutaura. Akanga achiri kwakaoma vabereki vake yemakwikwi hunhu akabuda akafanana kumboitika. Wakadzingwa.
Munogonawo nezvazvo vemifananidzo akafanana Lil Wayne. Kune vamwe rap vanongoda kuva nomukurumbira uye kuita mari. Kwete Lil Wayne. Anoda kuti mukuru…
The Very Sad Chokwadi